Blockchain News 27 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
EyoMqungu 27, 2018 admin
$524M Nem yebiwa lomnqweno yimfumba ye exchange Japanese Coincheck
Japanese exchange cryptocurrency Coincheck waqinisekisa ukuba $524 million imali digital ebiweyo-mhlawumbi ngokwenza eyodwa lomnqweno yimfumba inkulu kwi yokutshintshana, nokuba outweighing i Mt. ukuphula Gox of 2014.
Yilaa njengoko kwiphephandaba Japanese Asahi Shimbun, elibika ukuba Coincheck wathi amanye 500 million Iiyunithi a cryptocurrency eyaziwa ngokuba Nem, nongaba 58 billion yen, awayevela izipaji abathengi '.
Ngoku isibonda siwile malunga $430 million, ukutyala yafikelwa bathengisa off nemfuyo yabo alandelayo amarhe le lomnqweno yimfumba ngaphambili ngoLwesihlanu.
Coincheck kubikwa basazama ukufumanisa uhlobo ukuhlasela, kodwa waphawula ukuba ezinye cryptocurrencies azizange negalelo. Abanye abagxeki yokusilela Coincheck ngayo KDE multi-SIG, apho izitshixo ezininzi ziyafuneka ukuze agunyazise intengiselwano, njengenxalenye ukuba semngciphekweni ukuba lula le lomnqweno yimfumba.
inkampani amandla Canadian uya kusebenzisa irhasi yendalo ukuze cryptocurrency sam
Ekubeni amaxabiso igesi yendalo kulindeleke ukuba sihlale phantsi, enye umvelisi Alberta kunyuke nge ngendlela elingaqhelekanga ukunyusa line yayo ezantsi: usebenzisa stream yayo igesi neeseva computer amandla Niya kumba cryptocurrencies ezinokuba ezihlawula ezifana Bitcoin.
Iron Bridge Resources Ltd. yabhengeza ubungaba umncedisi omtsha obizwa Iron Bridge Technology ngelinge ukujoyina cryptocurrency kunye blockchain craze - kodwa arbitrage umahluko phakathi kwexabiso Bitcoin, ngoku zixabisa US $ 11.188 ezinkozo nganye, negesi AECO, ngoku zixabisa $1.98 ngalinye cubic amawaka.
Iron Bridge uceba ukutshisa igesi kunye nokuvelisa umbane, kwaye usebenzise ukuba umbane ukuze amandla ikhompyutha yentsimbi imigodi currency digital.
sithatha ukuba 215 iiyure kilowatt of nombane eziyimfuneko ukuze kufezekiswe Bitcoin enye, Iron Bridge wayengase US $ 49 mcf nganye lwerhasi yayo.
Oko ngaphezu 30 amaxesha ixabiso Iron Bridge okwangoku lifumana lwerhasi yayo, nokuzazisa amaxabiso yangoku AECO and Bitcoin.
"Njengokuba ndikhathala, zonke igesi owomileyo shishino kufuneka ufumane i lift kule ndaba, ngokuba ngamaqumrhu abalawuli ziya ukuba azibuze ukuba kuxa kutheni iinkampani ayikwazanga banikezele inxalenye imveliso yabo kulo. "Wathi GMP FirstEnergy usekela-sihlalo kunye nentsebenziswano intloko yentengiso amandla kunye norhwebo Trent Boehm.
Post Previous:Chainalysis – yinkampani owatshabalalisa ukungaziwa Bitcoin
Post Next:Indlela Endayeka Phantse 200 Bitcoin zokuthengisa le nyanga edlule